के हुँदैछ म्यानमारमा ? Globe Nepal News Portal
वाशिङ्गटन डिसी,सेप्टेम्वर १६ विगतमा सैनिक शासनका कारण र प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीमाथि त्यहाँको जुन्ता सरकारले गर्ने ज्यादतीका कारण सधैँजसो चर्चामै आईन् । तर विश्व समुदायबाट लगभग अलग्गिएजस्तो रहने म्यानमार यतिखेरै अर्कै विषयले चर्चामा छ । यस चर्चाको केन्द्रविन्दुमा पनि सुकी चाहिँ छुटेकी छैनन् । दशकौँपछि म्यानमारले प्रजातन्त्र देखेको तीन वर्षमात्र भयो । त्यसका लागि सुकीको योगदान संसारलाई थाहै छ । तर यतिछोटै समयमा सुकीमाथि त्यही संसारले प्रश्न गर्दैछ के भएको हो म्यानमारमा भनेर? किनभने यतिखेर सुकी नै म्यानमारको शासनको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा छिन । उनी विदेशमन्त्री मात्र होइन, म्यानमार सरकारको राज्य सल्लाहकार पदमा पनि छिन् । तर देशबाट रोहिङ्गा नामको एक जातिका नागरिक लखेटिएर विदेशमा शरणार्थी बन्नु परिरहेको दृश्यको उनी मुकदर्शक मात्र भएकी छन् । यसैकारण यी प्रश्न उब्जिएका हुन् ।
हालसम्म पनि अप्रत्यक्ष सैनिक शासनको प्रभाव रहेको म्यानमार सरकार यस विषयमा अज्ञात छ भनी कसरी अनुमान लगाउन मिल्ला । रोहिङ्गा समुदायमाथि भएको सैनिकबाट अत्याचार भएको उक्त समुदायको दाबी छँदै नै छ । अर्को कुरा लाई सरकारले नबुझे झैं गरेको वा आँखा चिम्लेको हो भने पनि यो ठूलो अन्याय हो । धार्मिक बिबादले हिंसा भड्केको भनी म्यानमार सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न चाहन्छ भने आन्तरिक कलहबाट उत्पन्न जातीय हिंसा कसले नियन्त्रण गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्छ । राससको अन्र्तराष्ट्रिय आलेखमा समाचार एजेन्सीहरुको समेत सहयोगमा मोहीनी मिश्र रिसाल लेख्छिन- म्यानमारकी बहुचर्चित प्रजातान्त्रिक नेतृ, नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता एवम् हालकी बिदेशमन्त्री तथा म्यानमारकी राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीले रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि सरकारले ज्यादति गरेको भन्ने अन्तरराष्ट्रियस्तरमै दुष्प्रचार मात्र भएको बताउनुभएको छ । उहाँले पछिल्लो समयमा म्यानमारका केही सामाजिक सञ्चार तथा विदेशी सञ्चार वा सन्जालले सैनिक ज्यादती भएको भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेका दाबी गर्नुभएको छ ।
म्यानमारबाट पलायन भई कडा जोखिम मोलेर बङ्गलादेश पुग्ने नागरिकका परिवार तथा बालबच्चालाई खान, बस्न र न्यूनतम मानवीय सुबिधा वा आधारभूत आवश्यकतासमेतको उचित व्यवस्था मिल्न नसकेको बताइन्छ । इतिहासको धेरै लामो कालखण्डदेखि सधँैजसो सैनिक शासनकै हालीमुहाली चलिआएको देखिने म्यानमारमा अहिलेको घटनाले नागरिक समाज र निर्वाचित सरकारलाई अन्योलमा पार्न सैनिक नेता कतै सफल त भएनन् भन्ने नयाँ र आमप्रश्न न्यायप्रेमी विश्व समुदायबीच उत्पन्न भएको छ । म्यानमारको संसद्मा अहिले पनि सैनिक नेतृत्वको दरिलो उपस्थिति रहेको छ । कहिले सैनिक शासनको दबदबा र यातना त कहिले नोबेल शान्ति पुरस्कार बिजेता आङ सान सुकीलाई समेत नजरबन्द राखेको कारण विश्वसामु करिब पाँच दशक नकारात्मक चर्चाको शिखरमा रहेको थियो । केही वर्षयता प्रजातन्त्रको देखापरेर शान्ति र समुन्नतिको आभास हुन थालेको सयममा रोहिङ्गा माथिको यो अत्याचारले यस देशलाई पुनःविश्वमा विवादास्पद बनाइदिएको छ ।
देशमा जातीय सफायाको आन्दोलनलाई सघाउने भित्री मनसायले मौनधारण गर्नुभएको हो वा यत्रो हिंसा भड्किँदा पनि नबोल्न विवश रहनुभएको हो भन्ने आरोप नागरिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार प्राप्तिको लागि जीवनको सुनौला अवधिभरी सङ्घर्षरत चर्चित नेतृ सुकीलाई लागेको छ । के सुकीले म्यानमारलाई कट्टरपन्थी बौद्ध धर्मावलम्वीको मात्र एकलौटी भूमि भनी बाह्य जगतलाई परिचय दिने मनसायले जातीयतालाई प्राथमिकता दिनुभएको हो रु उहाँमाथि अहिले यही प्रश्न बढी तेर्सिन्छ । सैनिक शासकको थिचोमिचो र दबाबबीच नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल उहाँले पाएको सो पुरस्कार फिर्ता लिनु पर्ने आवाज समेत उठाइन थालेको छ । यो आवाज सही हो या सुकीको मौनता वा विवशता हो भन्ने विषयमा विभिन्न प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् ।
यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाले म्यानमारलाई फेरि अर्को एक पटक विवादमा ल्याइदिएको छ । र त्यो विवादको केन्द्र हिजोको जुन्ताजस्तै आज सुकीमा सरेको छ । यसै विवादले गर्दा उहाँ संयुुक्त राष्टसंघको महासभामा सहभागी हुन पनि जान सक्नुभएन । यसैलाई पनि विदेशी समुदायले रोहिङ्गाको विषयमा जवाफ दिन नमानेकोले उहाँ त्यहाँ नजानुभएको बताएका छन् । तर यस विषयमा पनि उहाँको सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छैन । त्यसैले पनि विश्व समुदायले यतिखेर सोधिरहेका छन् म्यानमारमा के भएको हो ? सुकीले के गर्दै हुनुहुन्छ ? र विश्व समुदाय भन्दैछ, यो प्रश्न सुकी शासनको बागडोरमा रहेकोले नै गरिएको हो ।